पारस र हिमानीको मन पनि सुन्दर छ - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
निर्णायकहरूको छनौट सही लाग्यो (फ्रन्टपेज : सर्वाधिक आकर्षक महिला पुरुष) । पारस खड्का र हिमानी शाह बाहिरी आवरणका मात्र सुन्दर होइनन् । उनीहरूको मन पनि सफा र सुन्दर छ ।
सुन्दरता बाहिरी आवरणले भन्दा स्वभाव र चरित्रले निर्धारण गर्छ (कस्ता महिला सुन्दर हुन्छन् ?) । हेर्दा राम्रा देखिने मानिसहरू भित्री रूपमा सुन्दर नहुन सक्छन् ।
आयुष्मान र प्रियंकाको सम्बन्धमा दरार आएको खबर सुन्नु नपरोस् (अन्तर्वार्ता : मेरो हात माग्न कहिले आउँछौं आयुष्मान) । सधैंभरी मिलेर बसेको, खुसी भएको सुन्न पाइयोस् । प्रियंका र आयुश्मानलाई शुभकामना ।
प्रेमका रूप मात्र फरक रहेछन् (प्रेमका अनेक रंग) । जीवनमा प्रेमले शान्ति र आनन्द दिन्छ तर आकर्षणका नाममा गरिने माया–प्रेमले बेचैनी मात्र दिन्छ । ओशोको लेख पढेपछि प्रेमका विभिन्न आयामका सम्बन्धमा बुझ्न पाइयो ।
संसार प्रेम मै अडिएकाले होला साहित्यमा पनि प्रेमकै विषयवस्तुले प्रश्रय पाउँछ (साहित्यमा किन प्रेम बढी लेखिन्छ ?) । प्रेमसम्बन्धी अमर न्यौपानेको अभिव्यक्तिले मन छोयो । प्रेमले मानिसलाई बाँधेको हुन्छ । प्रेम नभएको भए जीवन फूल नभएको बगैंचा जस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा सहमति छ ।
सामाजिक सञ्जालले प्रेम सम्बन्ध जोड्न त सजिलो बनाएको छ (सामाजिक सञ्जालमा प्रेमसम्बन्ध) तर,त्यसमा दिगोपन भने हुँदैन र त्यो प्रेम उति जीवन्त पनि हुँदैन । निरन्तरको भेटघाट अनि चिनजानले मात्र सम्बन्ध बलियो हुन्छ । भर्चुअल दुनियाँ, वास्तविक दुनियाँभन्दा फरक छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा त विश्वास र प्रेम नै हो (भ्यालेन्टाइन डेको डिजिटल गिफ्ट) । गिफ्ट त माया दर्साउने माध्यम मात्र हो ।
डेटिङ सफल बनाउने टिप्समार्फत राम्रै जानकारी मिल्यो (सफल डेटिङका लागि) । सामान्य लाग्ने कुराहरूले जीवनमा धेरै ठूलो महत्व राख्छन् । लेखमा उल्लेख गरिएका कुराहरू सान्र्दभिक अनि महत्वपूर्ण छन् ।
सञ्चिता लुइँटेलको भ्यालेन्टाइन सम्झना रमाइलो रहेछ (अनुभव : हाम्रो भ्यालेन्टाइन डे) कक्षा चार मै पढ्दा भ्यालेन्टाइन डे मनाएकी सञ्चिता वैवाहिक जीवनमा बाँधिए पनि श्रीमान्सँग उनको सम्बन्ध साथीको जस्तै रहेछ । यस्तो सम्बन्ध कमै मानिसको मात्र हुन्छ ।
प्रेमले उमेर, जात आदि केही भन्दैन (चर्चामा छन् यी जोडी) । त्यसैले उमेर धेरै फरक भए पनि कतिपय सम्बन्ध मजबुत छन् । कतिपय सम्बन्ध चर्चाका लागि मात्र बनाइए जस्ता देखिन्छन् ।
सबै विवाहित जोडीलाई शुभकामना (सेलिब्रेटी विवाहको वर्ष) । सबैको सम्बन्ध दिगो होस् ।
घुमघाम तथा उपहारसम्बन्धी टिप्स मन परे । अन्य अंकहरूमा पनि यस्तै रोचक टिप्सहरू पढ्न पाइयोस् ।
संसारमा सबैलाई प्रेमको आबश्यकता हुन्छ (मुक्त आकाश : आउ प्रेम गरौं) । अरूको कमीकमजोरीहरु स्वीकार गरे मात्र चोखो प्रेम हुन सक्छ । अन्यथा त्यसलाई आकर्षण मात्र मान्न सकिन्छ ।